TOE-TSAINA MPANDRESY – Blaogin'i Voniary
Eo ireo namana sy tapaka manohana anao, fa misy lanjany kokoa rehefa avy aminao ny hery entinao miatrika ny fiainana. Io ilay toe-tsaina mpandresy, tsy manoloana ny sedra ihany fa amin’ny fotoana rehetra. Na faly na ory ianao dia aoka hitoetra ho mpandresy hatrany. Mila kolokoloina toy ny voninkazo anefa io toe-tsaina io mba handrobona, raha tsy izany halazo ary mety ho faty. Indreto ary misy fomba afahanao mitaiza ny herin-tsainao isan’andro.
Olombelona ihany ianao ka manana fahalemena. Raha sendra ny mpanatsatso ianao mety ho kivy, raha sendra ny mpanangoly ianao mety ho ketraka. Hevero toy ny siny iray ny herinao, amin’ny voalohany tsy misy rano ao anatiny fa nofenoina izy avy eo. Mandeha ny kenonkenona ao an-trano, nampiasaina ny rano nandrahoana ny vary sy nanasana vilia. Nony kelikely dia foana ny siny ka tsy maintsy miverina mantsaka indray hamenoana azy. Toy izany koa ny herinao, na saina na vatana na fanahy. Mila manovo hery ianao mba hiavao hatrany. I JESOA no loharano tsy ritra azonao hanovozana isaky ny mila ianao. Koa aza atao ambanin-javatra ary ny fifandraisanao amin’ilay Nahary anao fa izy no fototra. Rehefa tena matoky azy ianao dia ho tsapanao ny heriny mambomba anao isan’andro. Hoy indrindra i Masindahy Paoly ao amin’ny taratasy ho an’ny Filipiana 4, 13 : « Mahefa ny zavatra rehetra aho, amin’ilay mankahery ahy ».
Ny asa atao an-kira, hono, vita toy ny tsy natao. Noho izany, misy fiantraikany amin’ny fientanam-po ny kalokalo. Tiako ny isintona ny sainao amin’ireo hira malagasy tsara. Hira natao hanairana ambom-po, hanentana anao hiatrika ny fiainana sy hijoro ho mpandresy hatrany. Mis amin’ny karazany avy izy ireny sokajin’olona rehetra na ny kely na ny lehibe. Misy amin’ny gadona maro koa toy ny hira madinika, vako-drazana, kalon’ny fahiny, salegy, tsapiky, kilalaky, rap gasy sy ny sisa. Na ny tonony na ny feony dia natao hanentanana anao. Koa, anjaranao no misafidy izay mifanandrify aminao. Santionany amin’izany ireto : Raboussa – Mpandresy ambonin’ny mpandresy, Tafita – mpandresy, Shyn – Mitsangàna mitràka sy ny maro hafa. Tsidiho ny takelaka blaogin’i Voniary raha te ahita hira maro mitovy karazana amin’ireo ianao.
Tsara ny manana teny notsongaina avy amina mpanoratra, mpandinika, mpihira, mpampianatra na olon-kendry. Tsy adino koa ireo ohabolana sy oha-pitenenana avy amin’ny fahendrena Malagasy. Ireny teny ireny manko no ampinga entinao miatrika ny fiainana. Ny ahy manokana izao fony aho folo taona no tsaroako nisy teny nanaitra ahy voalohany. Teo amin’ny varavaran’ilay masera mpanabe izay dia nisy tononkalo, « Ny tsikitsiky » no lohateniny, nadika avy tamin’ilay tononkalo nosoratan’i Raoul Follereau. Tononkalo mahafinaritra izy io, milaza ny tombon-tsoa azo avy amin’ny tsikitsiky , izay harena natao hozaraina. Lava loatra moa ilay izy ka sarotra ho ahy ny nitadidy azy rehetra, fa rehefa tonga tany an-trano aho dia nosoratako tao anaty diary ny hoe « Tsy misy vidiny ny tsikitsiky fa mahasambatra ny fo ». Dia io teny io no anisan’ny manentana ahy isan’andro hatramin’izao.
Ireo rehetra ireo no rano, zezika sy fitaovana entinao mikirakira ilay voninkazon’ny herin-tsainao. Raha mahavatra manao ireo dia ho hitanao fa ho mpandresy hatrany ianao. Ary raha ny Malagasy tsirairay no manena toe-tsaina mpandresy dia ho rakotra olom-banona i Madagasikara.
développement personnel gasy, empowerment gasy, mpandresy aho, mpandresy ianao, teny manentana, vavaka
Un commentaire sur “TOE-TSAINA MPANDRESY”
Tsara loatra! Mankasitraka @ fizarana